Top 10 Instagrammable places in Myanmar – LODGGY
အလှတရားတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာတော့
စေတီပုထိုးတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ တောင်တန်းတွေ၊ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအလှနဲ့ကျွန်းစုတွေ၊ မြောက်ဖျားမှာဆို ရေခဲတောင်၊ အနောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ ကမ်းခြေတွေ၊ လှိုဏ်ဂူတွေ၊ ရေတံခွန်တွေနဲ့ အလှတရားတွေပေါများပါတယ်။
ခရီးသွားဓါတ်ပုံလေးတွေ အတင်များဆုံးနဲ့ ထူးထူးခြားခြားလှနေတဲ့နေရာတွေကတော့..
ဘယ်နေရာလေးတွေရောက်ဖူးပြီးပြီလဲ?ဘယ်နေရာတွေကော သွားဖို့ကျန်သေးကြလဲ ?
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အထွတ်အမြတ်ထားရာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးက ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ စေတီပုထိုးတွေပေါများလို့ Golden Land လို့ ကမ္ဘာကသိတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးအထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ လောက်ကစတည်ထားခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံး စေတီတော်တွေထဲက တစ်ဆူအပါအဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေ လည်ပတ်မှုအများဆုံးနေရာတွေထဲက တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
A post shared by @40ltravels on Feb 26, 2020 at 3:33am PST
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၉၀၀ လောက်ကတည်ထားခဲ့တဲ့စေတီပုထိုးတွေအများစုနဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ဘေးမှာလဲလျောင်းတည်ရှိနေတဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့တော် ပုဂံကတော့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုပါ။ ပုဂံရဲ့လွမ်းမောဖွယ်နေဝင်ချိန်တွေ၊ မိုးပျံဘောလုံးတွေနဲ့ မနက်ခင်းအလှပုံတွေ မရိုက်ဖူးသေးရင်တော့ bucket list ထဲထည့်ထားလိုက်တော့နော်..
A post shared by Marisa | TRAVEL BLOG (@thisworldtraveled) on Dec 6, 2019 at 5:43am PST
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းက အင်းလေးကန်မှာတော့ ရေပေါ်စိုက်ခင်းတွေ၊ ရှမ်းတောင်တန်းတွေ ဝန်းရံထားတဲ့အင်းလေးကန်အလှနဲ့ လှေကို ခြေနဲ့လှော်တာတွေ စတဲ့တမူထူးခြားတဲ့အလှတရားတွေကြောင့် ကမ္ဘာကျော်ပါတယ်။
İnle gölü balıkçıları ❤️ . . #myanmar #natgeo #natgeomyshot #inlelake #travel #wonderful_places #natgeotravel #natgeoyourshot #natgeoyourshotphotographer #beautifuldestinations #paradise #earthofficial #earthpix #earthpix #yourshotphotographer
A post shared by İlhan Eroğlu (@ilhan1077) on Apr 25, 2020 at 7:21am PDT
အာရှတိုက်ရဲ့အလှဆုံးကမ်းခြေတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ငပလီကမ်းခြေကတော့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ အသွားများတဲ့ကမ်းခြေတစ်ခုပါ။ ငပလီကမ်းခြေရောက်ပြီဆိုရင်တော့ နေဝင်ချိန်နဲ့ Instagram မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ အုန်းပင်နဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့အုံးနော်။
A post shared by HANNAH & NICK – A TRAVEL LIFE (@saltinourhair) on Feb 20, 2018 at 6:11am PST
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ဆုံးကျွန်းတံတားဖြစ်တဲ့ ဦးပိန်တံတားနဲ့ တောင်သမာန်အင်းရဲ့ နေဝင်ချိန်အရမ်းလှတာကြောင့်ဉီးပိန်တံတားကလည်း Instagrammable places တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။
#ubeinbridge #amarapura #mandalay #Myanmar #mariko #beautiful #lady #girl #burmese #sunset #fujifilm_xseries #fujifilm #xe2 #xf56mm #travelphotography #travel #portrait model: @myochitchitsu
A post shared by หนุ่ม (@i_love_snapshot) on Mar 28, 2018 at 8:32am PDT
ရေအောက်သန္တာ ကျောက်တန်းတွေ၊ လှပတဲ့ကမ်းခြေတွေ၊ ကျွန်းတွေပြည့်နှုက်နေတဲ့ မြိတ်ကျွန်းစုတွေကလည်း ဘဝမှာ တစ်ခါလောက်တော့ ရောက်အောင်သွားသင့်တဲ့နေရာပါပဲ။
A land of sea gypsies 🐚⁣🧜🏻‍♂️⁠⠀ ⁣⁠⠀ Opposite the Myanmar coast isolated and unchanged for centuries lie about 800 mountainous densely forested islands. Here impenetrable jungles meet white sandy beaches forming the Mergui Archipelago one of the last untouched island paradises. Animal and bird life is prolific. On the larger islands, elephants, tigers, deer, wild boars, and other species still exist inatime warp.⁣⁠⠀ ⁣⁣⁠⠀ Horse Shoe Island, Mergui Archipelago, Myanmar⁣⁠⠀ VISIT 📍www.islander.io/mergui-archipelago⁠⠀ ⁠⠀ ~~~~~⁠⠀ ⁠⠀ Follow @islander.io to discover yacht holidays across most fascinating island destinations in Southeast Asia.⁠⠀ ⁠⠀ Visit www.islander.io to charter extraordinary voyages on the world's most beautiful yachts.⁠⠀ ⁠⠀ ~~~~~⁠⠀ ⁠⠀ ⁣⁠⠀ #mergui #islands #myanmar #boattrip #boattrips #sailingtrip #sailingthailand #goexplore #sandybeach #beachside #beautifulseasia #wow #tropical #sea #lookatthosecolours #tropicalvibes #islandvibes #palmtrees #bestplacestogo #turquoisewater #sailingholidays #luxuryworldtraveler #picturesque #lookatthosecolours #amazingview #islandhopping #tlpicks #dametraveler #amazingthailand #islanderio⁣
A post shared by Discover your island paradise (@islander.io) on Oct 14, 2019 at 8:56am PDT
စစ်ကိုင်းတိုင်း မင်းကွန်းဒေသက မြသိန်းတန်စေတီကို ရှင်ဖြူမယ်ဘုရားလို့လည်း လူသိများပါတယ်။ စေတီရဲ့ ဗိသုကာလက်ရာအလှအပတွေနဲ့ အရောင်တွေကြောင့်နိုင်ငံခြားသားတော်တော်များများသွားရောက်ကြသလို အခုနောက်ပိုင်း အသွားများလာတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Hsin Phyu Mya Shin @ Mya Thein Tan Pagoda⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Last time I was in Mingus area, I must have only been around 12?. First time I have ever been to Hsin Phyu Mya Shin.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Pro tip:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1. never ever go to Mingun area during any Buddhist holiday. The roads leading to mingun are quite narrow and there areafew spots where barely one car can pass. This leads to cars being lined up forafew km long. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2. Go as early as possible or in the evening. The site is out in the open with no shelter. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #myanmar #Igersmyanmar #mymyanmar #seemyanmar #instamyanmar #vscomyanmar #mingun #sagaing #myanmar #visit_myanmar_now #TravelRepost #iamtb #TLPicks #backpackwithme #uniladadventure #travelinsider #passionpassport #backpackersintheworld #itravelbecause
A post shared by Aung Toe (Travelin Bamar) (@a.toe) on Oct 15, 2019 at 3:54am PDT
ထူးခြားဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကတော့ တော်တော်များများရောက်ဖူးကြတဲ့နေရာလေးပါ။ နေဝင် နေထွက်ချိန်ရှုခင်းနဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေ မြင်ရမယ့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအလှတွေကို ခံစားလို့ကောင်းပါတယ်။ တန်ခိုးကြီးလို့ တစ်နှစ်တစ်ခေါက် ပုံမှန်သွားကြသူတွေလည်း များပါတယ်။
A post shared by jennifer sawyer (@iputmylifeonashelf) on Nov 28, 2017 at 3:51am PST
ကျောက်စာရေအချပ်များတာကြောင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစာအုပ်လို့ တင်စားရေးသားကြတဲ့ မင်းတုန်းမင်းရဲ့ကောင်းမှု ကုသိုလ်တော်ဘုရားကတော့ မနက်ပိုင်း ဘုရားသွားဖူးရင်း ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းပါတယ်။
Surrounding the pagoda are 729 shrines each containingasingle marble slab inscribed in both sides in Burmese script 🇲🇲⠀ Together, the 729 slabs are called “the world’s largest book”, each stone slab representing one of its pages 🇲🇲📜⠀ The slabs are inscribed with texts of the Sutta Pitaka, the Vinaya Pitaka and Abhidhamma Pitaka, the three parts that make up the Tripitaka, the teachings of the Buddha written in ancient Pali language 🇲🇲⠀ .⠀ -⠀ -⠀ 📸Thanks @24hourslayover for the incredible photo 😊⠀ .⠀ -⠀ -⠀ #kuthodawpagoda #kuthodaw #mandalay #myanmar #kuthodawtemple #travelgram #myanmartrip #travel #travelguide #traveler #myanmartourism #myanmartravel #travelling #southeastasia #mandalayhill #travelphotography #mandalaypalace #diytours #likeforlikes #follow4like #instagood #followme #mingun #likeforlikeback #following #followmeto #followers #followforcomment #goasiadaytrip #gadt
A post shared by GoAsiaDayTrip (@goasiadaytrip) on Sep 21, 2019 at 7:53am PDT
လျှိုမြောင်တွေကိုဖြတ်သန်းဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဂုတ်ထိပ်တံတားကို ဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခိုက်အတန့်ကတော့ ဘဝမှာမေ့မရနိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။
The undeniably impressive Goteik Viaduct in Burma! #insideasia #goteikviaduct #Burma #myanmar #exploremore #travelburma #worldtraveller #train #shanstate
A post shared by InsideAsia Tours (@insideasiatours) on Jan 13, 2018 at 12:51pm PST